Mudzidzisi Wangu Haandifariri | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ndingaitei Kuti Ndiwirirane Nomudzidzisi Wangu?
Funga zvakaitika kuna Rachel. Rachel anga ari kurova chikoro zvisingaiti. Asi paanga ava giredhi 7 zvinhu zvakatanga kuchinja. “ Mudzidzisi wangu aiita zvose zvaaigona kuti ndifoire, ” anodaro Rachel. Ko dambudziko rakanga riri papi? Mudzidzisi wacho akabudira pachena Rachel namai vake kuti akanga asingafariri chechi yavo.
Vadzidzisi vanokubatsira kuti uve neramangwana rakanaka sezvinongoita matombo anobatsira kuti upfuure pane mvura
Chii chakazoitika? Rachel anoti: “ Mudzidzisi wangu aiti pose paaiwana mukana wokuti andifoirise aitondifoirisa nemhaka yokusafarira chechi yangu. Izvi pazvaiitika amai vangu vaienda neni kwaari vonotaura naye. Nokufamba kwenguva zvinhu zvakazoita nani. ”
Kana uine dambudziko rakaita seiri, usatya enda unotaura nevabereki vako. Zviri pachena kuti vachati vanoda kunotaura nomudzidzisi wako kana kuti vakuru vechikoro kuti dambudziko iri ripere.
Ichokwadi kuti hadzisi nguva dzose zvinhu pazvinogadziriswa zvikapera. Pane dzimwe nguva unotofanira kuva nomwoyo murefu. (VaRoma 12:17, 18) “ Mumwe wevadzidzisi vedu akanga asingafariri kirasi yedu, ” anodaro Tanya. “ Aigara achitituka achiti tiri madununu. Mazuva okutanga ndaichema asi ndakazoona kuti handifaniri kugumburwa nezvaaiita. Ndaiisa pfungwa dzangu pabasa rechikoro. Pakupedzisira akanga asingachandituki uye ndakanga ndava mumwe wevana vashoma vakanga vava kumakirwa mabhuku zvakarurama. Mudzidzisi uyu akazodzingwa pachikoro pashure pemakore maviri. ”
Chinhu chinokosha: Dzidza kuti ungaramba sei uchifarira chikoro pasinei nokuti mudzidzisi wacho akaoma. Kuita izvi kuchakubatsira kuva neunhu hunokosha muupenyu paunozosangana nomukuru webasa anenge akaoma kushanda naye. (1 Petro 2:18) Zvichakubatsirawo kuti utende vadzidzisi vakanaka vaunozova navo.